लकडाउन आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै पिट्न थालेको प्रहरीको कुटाइबाट १ जनाको मृत्यु — Imandarmedia.com
लकडाउन आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै पिट्न थालेको प्रहरीको कुटाइबाट १ जनाको मृत्यु
Patna-March.24,2020-Police personnel punish people for violating the lockdown amid the Coronavirus Pandemic at Malahi Pakri, Kankarbagh in Patna. Photo by – Sonu Kishan.
काठमाडौ । नेपालमा ७ दिनका लागि लकडाउन हुँदा १ अर्ब ३० करोड भन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा २१ दिनलाई लकडाउन गरिएको छ । दैनिक ज्यान मजदुरी गर्नेहरु यसबाट नेपालमा पनि प्रभावित भएका छन् । भारतमा यो अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको छ । लकडाउनको समयमा सडकमा निस्केका मान्छेहरुलाई प्रहरीले पिट्ने गरेको छ । भारतको राजस्थानमा प्रहरीले लखेट्दा एकजनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै अर्को घटना पनि बाहिर आएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिओस् भनेर बुधबारदेखि भारतमा २१ दिन लामो लक डाउन सुरू गरिएको हो ।
लक डाउनका बेला बाहिर निस्कनेलाई त्यहाँको प्रहरीले केहीलाई कुटपिट गरेको त केहीलाई उठबस गराएको भिडियो–तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । केहीले प्रहरीले गर्ने व्यवहार ठिक भएको बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले यस्लाई गलत भनेका छन् । बुधबार नै प्रहरीको कुटपिटबाट पश्चिम बंगालमा एक जना युवाको नै ज्यानै गएको खबर बाहिर आएको छ । पश्चिम बंगालस्थित हाउराह जिल्लाका ३२ वर्षीय लाल स्वामी बुधबार साँझ दूध किन्न भन्दै घरबाट निस्किए ।
सडकमा पुगेपछि प्रहरीले उनलाई नराम्रोसँग कुटपिट गरेर घाइते बनाए । उनको अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । उनको परिवारले प्रहरीले हानेको चोटबाट स्वामीको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले भने उनलाई हृदयघात भएर मृत्यु भएको दाबी गरेको छ ।
त्यसैबिच अहिले सिंगो विश्व नै कोरोना भाइरसँग लडिरहेको छ । तर अहिले अमेरिका र चीन यसलाई लिएर राजनीति गर्न थालेका छन् । यो फोहोरी राजनीति यी दुई देशरुले सुरु गरेपछि यसको असर अन्य देशहरुले पनि भोग्नु परेको छ । विशेष गरेर अमेरिकाले कोरोना भाइरसलाई ‘वुहान भाइरस’ भन्नुपर्ने अडान राखेपछि विश्वका सात ठूला राष्ट्रको संगठन जी–७ मा मतविभाजन भएको छ । कोरोनाभाइरस सम्बन्धी सात
राष्ट्रका विदेश मन्त्री संलग्न बैठकपछि जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा कोरोनाको सट्टामा ‘वुहान भाइरस’ लेख्नुपर्ने अमेरिकी विदेश विभागको ढिपीपछि संयुक्त वक्तव्य नै जारी हुन नसकेको बताइएको छ ।चीनले यो भाइरस अमेरिकी सैनिकहरुले चीनमा ल्याएको बताउँदै आएको छ । ‘वुहान भाइरस’ भन्ने शब्द लेख्नुपर्ने अमेरिकी दबाबलाई अरु देशले अस्वीकार गरेपछि समूहमा विभाजन आउनुका साथै वक्तव्य नै अलग्गै
आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त यस्लाई चाइनिज भाइरस भन्दै आएका छन् । अमेरिकी विदेश विभागको सुझाव रातो रेखा भएको र यसरी भाइरसको ब्राण्डिङ गरेर सूचना प्रवाह गरिने विषयसँग सहमत हुन नसकिने एक यूरापेली कूटनीतिज्ञले बताएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । अमेरिकी मस्यौदामा महामारी फैलिनुमा चीनमाथि समेत दोष लगाइएको छ ।तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पष्ट र आधिकारिक रूपमा यसलाई कोविड १९ वा कोरोना भाइरस भनिसकेको छ । अमेरिकाले मस्यौदा गरी अरु सात देशका विदेश
मन्त्रीहरुलाई पठाएको १२ अनुच्छेदवाला वक्तव्यमा कोरानालाई ‘वुहान भाइरस’ भनिएको थियो । अमेरिकी अध्यक्षतामा गठबन्धनको बैठक गरिएकाले वक्तव्य मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको थियो । जी सेभेनमा अमेरिकासहित बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान र क्यानडा सदस्य छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोपकै कारण बैठक पनि भिडियो कल मार्फत गर्नुपरेको थियो ।